Edit What is the impact of US dollar exchange rising ra | Ding Tai
Dezie Gịnị bụ mmetụta nke US dollar mgbanwe ebili ra
Kedu ihe mmetụta nke ọnụ ahịa mgbanwe dollar US na-arị elu na ndị na-ebupụ igwe na-ebupụ bọmbụ ndị China?
ịrị elu nke dollar US ọ bụ ozi ọma ma ọ bụ akụkọ ọjọọ maka ndị na-emepụta igwe na-agbawa agbawa na ndị na-ebupụ?
Mee 11 mere na China Morning Post Wednesday, Eprel 11 nke kalenda ọnwa
Ọnụego mgbanwe oge "BOC ọnụahịa ịzụta mba ofesi": 1 US dollar = 6.7216 RMB / / 1 euro = 7.0747 RMB
Nke a ọ bụ ozi ọma ma ọ bụ akụkọ ọjọọ maka ndị na-emepụta igwe anyị na-agbawa agbawa?
Mmetụta dị aṅaa ka ngbanwe nke ọnụego mgbanwe dollar US na-enwe na mbubata na mbupụ ahia nke igwe na-agbawa agbawa?
N'ezie, mmetụta nke ịrị elu nke US dollar ọnụego mgbanwe mba ọzọ na aku na uba China nwere ma uru na ọghọm, ma n'ozuzu na-ekwu, ọ nwere ihe ọghọm karịa uru.
Nke mbụ, ọ bụ ihe na-adịghị mma maka mbupụ ahia mba ofesi nke China Ịmepụta azụmahịa mba ofesi na ịgbasa mbupụ bụ isi ihe United States na-etinye nrụgide na ekele nke RMB na-ekwu na United States nwere nnukwu ego ahia ahia na China.
Anyị nwere ike mara site n'echiche nkịtị nke akụ na ụba na ọ bụrụ na ego obodo na-enwe ekele, ego nke mba ndị ọzọ ga-ebelata, ya bụ, maka ọrụ ịzụ ahịa mbupụ, mba na-ebubata ga-enyekwu ego ego n'ime ụlọ maka mgbanwe otu ngwaahịa ahụ, ya mere, mbubata. obodo nwere ike ịgbanwe ngwa ahịa na mba ndị ọzọ, nke ga-emebi mbupụ ya.
N'ụzọ megidere nke ahụ, ọ bụrụ na ego obodo na-ebelata, ego nke mba ndị ọzọ ga-enwe ekele, ya bụ, a na-achọkwu ego obodo iji bubata otu ngwaahịa ahụ, nke ga-emerụ mbupụ nke mba ndị ọzọ.
Kedu ihe kpatara dollar US ga-eji bulie elu elu n'oge a?N'iji nlezianya na-atụgharị uche n'echiche dị n'okpuru nke ekele nke dollar US, anyị na-amawanyewanye na ahịa "Eurodollar" bụ isi ihe kpatara nsogbu ahụ.
Ntụle siri ike nke dollar US apụtaghị na dollar US siri ike.N'ụzọ megidere nke ahụ, ọ na-egosi oke adịghị ike nke usoro mgbasa ozi dollar US zuru ụwa ọnụ!
Onye nkuzi m kọwara echiche ndị a.Dị ka onye nkịtị mbupụ ahịa nke ogbugba ogbugba igwe, kasị kensinammuo mmetụta na nso ga-eme n'ọdịnihu bụ Mbelata esenidụt mbubata zuo iwu;Na ọnụ ahịa ịrị elu nke ndị na-ebubata ihe.
Oge nzipu: Mee-20-2022
Igwe na-agba ọkụ roba Belt, Hook Polisher Abrator, Nko abụọ Abrator, Site na igwe na-agbawa nri ọkụ, abrator, Igwe na-agbapụta eriri roba ụdị agba, Ngwaahịa niile